Palletizer - Delta Engineering Belzika
Tratra baoritra teo aloha
Masinina hamoritra sy hametahana ireo fitoeram-baoritra ho azy (lovia 120 / ora). Mampandeha hatrany amin'ny 1200 x 1200 mm (47 ″ x 47 ″).
Published in Palletizers
Palletizer semi-automatisable be dia be izay afaka manangona tavoahangy poakaty marobe ao anaty lovia (antsasaky ny), amin'ny takelaka fisaka, eo ambanin'ny saron-doha, na tsy misy lovia (kaontenera azo arahana)
Latabatra buffer: 1200 mm ny halavany - hatramin'ny 1200 mm ny sakany.
Afaka manao paleta avo lenta hatramin'ny 1,6 m ny haavony.
Latabatra buffer: 1200mm lava - hatramin'ny 1400mm ny sakany.
Tavoahangy palletizer automatique misy trano fitehirizam-bokatra vita
Palletizer mandeha ho azy feno miaraka amina trano fitahirizam-bokatra anaty fonosana mba hamonosana tavoahangy banga ao anaty lovia.
Ny singa dia afaka manamboatra paleta avo hatramin'ny 3.1 m avo. Miaraka amin'ny gripa servo. Afaka mahazaka dabilio antsasaky ny habeny ihany koa.
Alakamisy 23 aprily 2020 by Cristina Maria Sunea
Palletizer automatique feno miaraka amin'ny trano fanatobiana entana
Tavoahangy palletizer automatique misy trano fitehirizam-bokatra misy kambana mitambatra mba hanamboarana vokatra foana ao anaty tady sy satroka.
Ny unit dia afaka manamboatra poketran'ny haavony feno hatramin'ny 3.1 m ny haavony.
Tavoahangy palletizer automatique misy trano fitehirizam-bokatra vita am-baravarankely mba hamonosana vokatra foana ao anaty fitoeran-damba, satroka ary amin'ny taratasy fisaka.
Alakamisy 14 Jolay 2016 by Cristina Maria Sunea
Palletizer mandeha ho azy ho an'ny kaontenera / amponga azo ampidirina - kinova kely
Palletizer mandeha ho azy feno ho an'ny kaontenera azo stackable 5 ka hatramin'ny 60 L. Ampiasaina matetika ho an'ny amponga 20-30L. Izy io dia afaka manao paleta hatramin'ny 3.1 m avo (7 layer amin'ny amponga 25L), mampihena ny vidin'ny fitaterana! Amin'ny ankapobeny dia dikan-teny voafintin'ny DP300, raha tsy misy ny conveyor roller.
Palletizer mandeha ho azy ho an'ny kaontenera / amponga azo ampidirina
Palletizer mandeha ho azy feno ho an'ny kaontenera azo atsofoka 2 ka hatramin'ny 60 L. Ampiasaina matetika ho an'ny amponga 20-30L. Izy io dia afaka manao paleta hatramin'ny 3.1 m avo (7 layer amin'ny amponga 25L), mampihena ny vidin'ny fitaterana!
Alatsinainy 20 septambra 2021 by Sara
Fantsona miangona amin'ny kitapo / lalantsara
Palletizer kitapo feno ho an'ny max. 80 kitapo isan'ora. Afaka manangona paleta 3 eo ho eo amin'ny buffer.
Palletizer lamba fisaka tanteraka
Palletizer mandeha ho azy feno mba hamenoana tavoahangy poakaty amin'ny ravina fisaka. Afaka manamboatra paleta avo (hatramin'ny 3.1 m). Azo ampiana fizarana palletizing 4 samihafa.